The World si Best Okenye Android Games I Kwesịrị Ịmara
Na-egwuregwu nanị pụtara n'ihi na ụmụ na-egwuri? Ọfọn, m azịza ya bụ mba. Game bụ ụdị nri na-dished si n'ihu ma ụmụaka na ndị okenye. Okenye kwa pụrụ ji uche ha na egwuregwu. Game bụ ụdị anwansi mkpisi na kpezie na Oké mgbagharị naa nke ndụ n'ime otu nke achicha. Okenye Android Games stormed ahịa na ya elu fim na ọtụtụ nde ndị ọrụ. Ya mere, ebe anyị na-ewetara gị top iri Okenye Android egwuregwu nke ga-bụ'abụ gị uche na-enye gị a bit rie ude nke enyemaka. Ugbu a, họrọ a ghota a na ndepụta ma na-ẹkenam a ụwa nke bụ free nke qualms na obi ụtọ dị ukwuu na njem.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na-akpali akpali android egwuregwu n'ihi na ndị okenye. The storyline nke egwuregwu a bụ kpam kpam zuru okè na ezi kpọmkwem haziri maka ndị okenye. The dịruru ná njọ nke egwuregwu a encounters obi ụtọ, mkpali na ọtụtụ atụgharịa twists.This Android Okenye egwuregwu bụ free nke na-eri otú ị ga-abụ n'ezie hụrụ n'anya na-egwu ya.
2. Ọchịchịrị Akụkọ Ifo
Egwu gburugburu ebe obibi, idei mmiri nke ọbara na vampires ga-imenye gị ụjọ. Ọchịchịrị Akụkọ Mgbe Ochie bụ kpam kpam ihe Okenye Android egwuregwu e mere kpọmkwem n'ihi na ndị okenye. Nke a bụ vampire egwu usoro na 3D ndịna-emeputa na free nke na-eri nke kpam kpam weghara n'anya gị.
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ngwangwa na-eto eto Poker Okenye egwuregwu na Android na ọtụtụ nde ndị ọrụ aha. E nwere 5 ruo 9 pokers tebụl na nke ị nwere gbaa si Poker asọmpi. Egwuregwu a nwere ndị kasị mma-emeputa magburu onwe ngosi.
4. Achicha Ugbu A-Nri egwuregwu
Ọ bụrụ na ị nri ndị hụrụ mgbe ahụ, a egwuregwu ga-surly ụgbọala ị crazy. Egwuregwu a ga-enye gị ohere ka akpọọ nkụ ọkacha mmasị gị achịcha na icho mma ha dị ka ị wish.This delicious Okenye Android egwuregwu bụ free nke na-eri. Okwu ahụ 'achicha' ga-eme ka gị na ọnụ na-adasị na mmiri. Ya mere kwụsị trickling na ibudata a yummy egwuregwu.
5. My esorowo Wedding: Party
Nke a Android Okenye egwuregwu bụ n'ezie a ihunanya egwuregwu na nke ị ga-ahọrọ gị mara mma di na iche iche outfits nke gị nhọrọ. Egwuregwu a ga-kpamkpam ịgbanwe gị na ọnọdụ na ga-ewe gị n'ụwa ọzọ.
6. Kụọ ya Ọgaranya! Free cha cha Ohere mepere
Nke a Okenye Android egwuregwu bụ nanị ihe iconic egwuregwu na nke ị nwere na-egwu ohere mepere egosipụta wizards, mmekọahụ na obodo ahụ, terminator na ọtụtụ ndị ọzọ. Ná mmalite na ị nwere 30,000 free ego na i nwere ike inwe ihe free mkpụrụ ego si kwa ụbọchị bonuses.So nke a bụ maa a ọgaranya mmalite.
7. Ọchịchịrị Arcana: The ejị
Otu inscrutable ngagharingosi eruwo ka obodo a, ebu ichegbu onwe ngwọju-anya ọbụla na ya. A na-eto eto nne okụrede na ugbu a ọ bụ oge gị na-ihe ịma aka na-ahụ na-efu onye. Ị ga-enyocha òtù abụọ na otu onye nke na ị na-ebi na ndị ọzọ na otu onye bụ ụgbọelu nke dị n'azụ ngagharingosi si Ụlọ Nzukọ nke gosipụtara omume. Nke a bụ egwuregwu jupụtara furtive ọnọdụ nke ị ga-abịa mara banyere ndị ajọ omume dị ka nke ọma banyere akụkọ nke otu ngagharingosi-arụ. Egwuregwu a ga-tiis uche gị a bit ma ọ na-adabere gị na otú ị ga-achọpụta ihe-omimi nke a magburu onwe Okenye egwuregwu n'ihi na Android.
8. The Bard si Akụkọ
Ahịa: $ 2.9
Bard si Akụkọ bụ otu n'ime funniest Okenye egwuregwu n'ihi na Android. Egwuregwu a nwere magburu onwe 3D ndịna-emeputa na kasị mma ngosi nke bụ isi isi nke akada ọkpụkpọ anya. Nke a bụ egwuregwu a center nke mma maka mmadụ nile bi ojoo magburu onwe Google play Fim. Egwuregwu a nwere a sara mbara ụwa inyocha agụta obodo, obodo nta, osimiri, oké ọhịa, castles, snowy ugwu, anọgidewokwa na-anyụ ebe, wdg Na egwuregwu a i nwere banyere 50 ụdị nke iro, 16 kpokọtara odide na 150 pụrụ iche artilleries.
Nke a Okenye Android egwuregwu na-efu ihe $15.48. Ndịna-emeputa nke egwuregwu a na-n'onwe mere site Kazuko Shibuya, onye bụ otu n'ime ndị kasị mma graphic emepụta. Ọ rụrụ ọrụ na ya na odide nke egwuregwu. Novelties webatara ikike na-egwu niile bụ isi odide dị ka egwuregwu si dike. The Epic storyline nke egwuregwu a na-emeri obi nke ọtụtụ ndị na egwuregwu a na-atụle-otu nke kasị elu gosiri egwuregwu nke Android.
10. Baldur n'ọnụ ụzọ ámá Enwekwukwa Edition
Nke a Okenye Android egwuregwu bụ ihe niile banyere emegbu omimi na ahụmahụ ya. Ị ga-abịa gafee egwu Red wizards na ọtụtụ jọgburu onwe ya ihe. Ị ga-ahụ oké ụjọ na ọbara gbaa gburugburu. Ya mere na-egosi gị ikike idi na-erigbu a dị ịtụnanya egwuregwu.
> Resource> emulator> The World si Best Okenye android egwuregwu ị kwesịrị ịma